HPHT Lablọ nyocha toro Diamond Manufacturers - China HPHT ụlọ nyocha toro Diamond Factory & Suppliers
Amamiihe Cut Sịntetik Diamond DEF VS2 1carat ụlọ nyocha toro Diamond Price Kwa Carat
Wụpụta ọla nke gị Chepụta ọla ịchọ mma nke gị. Họrọ otu diamond anyị ga-ebipụ ma hazie gị. Nkebi oke Ihe Lablọ nyocha toro diamond Brand Alskar Diamond na-akpụzi Gburugburu, Oval, ube, fom, Obi, Emerald, Marquise, wdg Size HPHT: 1mm ~ 8mm CVD: 4mm ~ 12mm Oge Mbuga N'ime ụbọchị 5 ma ọ bụrụ na ngwaahịa , Western Union, MoneyGram, e-checking, Mastercard Shipment DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS Service 1) OEM, ODM nabatara ...
SI1-SI2 B Grade HPHT Nwoke Mere Diamond Stone Maka Ọla
SI1-SI2 B Grade HPHT Man Made Diamond Stone For Jewels Gịnị bụ ụlọ nyocha toro Diamond Esemokwu dị n'etiti ihe okike na ụlọ nyocha toro diamond sitere na otu esi mee ha. Grownlọ nyocha ndị toro eto na-arụ ọrụ n'ime ụlọ nyocha ka emepụtara diamonds dị n'ụwa. A na-eme diamonds nke nwere ihe ịga nke ọma na-e successfulomi site na iickingomi okike na nrụpụta / nrụgide dị elu (HPHT). E nwere usoro nrụpụta atọ dị iche iche ejiri mee diamonds HPHT: igwe eriri igwe, akụrụngwa cubic, ...
VS VVS A ọkwa HPHT ụlọ nyocha toro Diamond Stone
VS VVS A ọkwa HPHT ụlọ nyocha toro Diamond Stone Gịnị bụ ụlọ nyocha toro Diamond Ihe dị iche n'etiti ihe okike na ụlọ nyocha toro diamond sitere na otu esi mee ha. Grownlọ nyocha ndị toro eto na-arụ ọrụ n'ime ụlọ nyocha ka emepụtara diamonds dị n'ụwa. A na-eme diamonds nke nwere ihe ịga nke ọma na-e successfulomi site na iickingomi okike na nrụpụta / nrụgide dị elu (HPHT). E nwere usoro ihe eji arụ ọrụ atọ iji mee diamonds HPHT: eriri igwe, teepu cubic, na sp ...